Fizaha tena feno ho an'ny orinasanao fitantanana fananana
Ny areti-mandringana Coronavirus dia nanova an'izao tontolo izao tamin'ny fomba tsy azon'ny olona eritreretina. Indostria samihafa, indrindra Airbnb ary ireo orinasa hafa manolotra serivisy fandraisam-bahiny, dia nanatri-maso ny fihemoran'ny toekarena. Fotoana fanavaozana sy fampifanarahana izao satria mbola betsaka ny asa tokony hatao.
Raha jerena ny areti-mifindra COVID-19, ny fidirana an-tsehatra ataon'ny olona dia mety hampitombo ny risika amin'ny fampitana coronavirus. Ny olon-tokana tsirairay amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia miatrika fiovana vaovao sy fanamby amin'ity tontolo ity noho ny areti-mandringana. Mpandraharaha mpanofa trano, mpitantana fanofana fialan-tsasatra, ary na ny tompona trano fandraisam-bahiny aza dia manandrana mitady vahaolana hafa hanatsara ny serivisin'izy ireo. Ny fampiasana ny fizahana tena dia mampihena ny fifandraisana misy eo amin'ny mpiasa sy ny vahiny.
Mety tsy ho mora ny fahazarana amin'ity tontolo vaovao iainantsika rehetra ity, indrindra ho an'ny olona ao amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, saingy i Zeevou dia miezaka mafy mitady fomba vaovao hanaovantsika rehetra ny asa manokana ataontsika lavitra.
Azo antoka fa misy tombony vitsivitsy amin'ny fandraisana ireo vahiny amin'ny fanananao manokana izay tsy fahampian'ny fizahana tena. Mahafinaritra ny mandray ireo olona nanofa trano taminao, tamin'ny alàlan'ny Meet & Greet na mpiambina olona. Manampy anao hahafantatra ireo vahininao izany ary hahatonga azy ireo hahatsapa ho mahazo aina kokoa rehefa any. Ary koa, ny fanetsiketsehana ny tanan'ny vahininao sy hahatonga azy ireo hahatsapa fa mandray azy ireo dia mandray vahiny 101. Na izany aza, raha dinihina ny toe-javatra vaovao misy antsika dia mila mandroso isika. Ny fandinihana ireo fenitra manalavitra ny fiaraha-monina dia sarotra amin'ny indostria misy antsika, iantsoana ireo safidy manokana. Ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia mijery hatrany ireo rafitra mamela ny fandinihan-tena lavitra, rehefa manome toky fa azo karakaraina tsara ny fomba rehetra; ary ny fananana rehetra dia voaro hatrany.
Ahoana no hanampian'ny Zeevou ny fizahana tsy misy fifandraisana?
Zeevou no lohalaharana amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny. Hitanay ny fomba nitondran'ny areti-mandringana Covid-19 fiainana vaovao ara-dalàna ho anay, ary nohavaozinay ny fiasa mba hanome taratra an'io "normal vaovao" io. Eto Zeevou izahay dia miahy ny fiarovana ireo vahininao sy ny anao koa. Tianay hitoetra ho salama sy hitantana tsara ny fanananao ianao. Mikendry ny ho rafitra fitantanana fananan-trano tsara indrindra any, nandany taona maro niasa izahay mba hahatratrarana automatisation feno manodidina ny fizotran'ny asa. Ho setrin'izany dia mivoatra izahay rafitra fikirakirana famandrihana mandeha ho azy tanteraka. Ity fizotry ny famandrihana tsy misy fifandraisana mandeha ho azy ity dia ahafahanao manangona antsipiriany momba ny vahiny, mandray fandoavam-bola, mandamina ny vola azo antoka ary manamarina ireo vahininao avy amin'ny tranonao na ny birao
Ao anatin'ny toetr'andro ankehitriny, io dia nahasarika fahalianana avy amin'ireo mpandraharaha amin'ny habe rehetra, satria mikasa ny hampihatra ny fizotrany sy ny fomba fiasa ahafahan'izy ireo mihazona hatrany ny orinasany izy ireo ary manome toky ny vahiny fa hampihena ny loza mety hitranga amin'ny mpiasa.
Ity vahaolana dizitaly ity dia ahafahanao mijanona ao an-trano, mitazona elanelana lavitra ary manaraka ny mason-tsivana rehefa manampy anao hitantana ny fanananao izahay na aiza na aiza orinasa fisavana lavitra toy ny KeyNest boaty hidy, hidy marani-tsaina na Keysafe, ampiasainao. Tsy misy olana amin'ny fisintomana rindrambaiko na mandalo dingana sarotra. Namboarinay ny fizahana ny tsy fifandraisanay ho porofo adala.
Ny fampiasana Zeevou's contactless Check-in dia mora sy mahitsy ary manome traikefa azo antoka sy mahafinaritra ho anao sy ireo vahininao. Ity fampiasa ity dia ahafahanao mahazo topy maso mety amin'ny famandrihana tsirairay sy ny dingana isaky ny dingana amin'ny alalàn'ny dingana fanamafisana famandrihana 5-dingana. Ny fizahana an-telefaona tsy misy fifandraisan'i Zeevou dia manampy anao amin'ny maha-mpampiantrano anao hanara-maso mora foana ny fahatongavanao sy hiantohana fa ny fifandraisana mandeha ho azy mandeha tsara dia mivoaka amin'ny vahiny amin'ny fotoana mety.
Zeevou dia manara-maso ny fitantanana fidirana an-tsekoly na dia ny dingana fanamafisana famandrihana 5 aza. Ity endri-javatra ity dia miantoka ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny famandrihana dia voafehinao. Raha vantany vao vita ny dingana fanamafisana famandrihana 5-dingana, dia halefa ireo torolàlana momba ny fizahana tena. Alao antoka fa mahazo ny fampahalalana rehetra ilain'izy ireo ny mpitsidika anao, rehefa ilain'izy ireo izany, ho an'ny traikefa tsara indrindra ho an'ny vahiny.
Ankoatra ny namoronan'i Zeevou an'io endri-javatra io mba hiarovana anao sy hahasalama anao mandritra ny fotoana ny valanaretina Covid-19, afaka mamonjy fotoana sy hery ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana maso tsy misy fifandraisana. Avelao Zeevou hanampy anao hitantana ny fanananao - Mifandraisa aminay izao ho an'ny demo maimaimpoana ary miaina ny tombotsoan'ny fizahana tsy misy fifandraisana ho an'ny fanananao.